किन भने जति हुँदैन इन्टरनेटको स्पीड ? - Khabarshala किन भने जति हुँदैन इन्टरनेटको स्पीड ? - Khabarshala
किन भने जति हुँदैन इन्टरनेटको स्पीड ?
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवालाई लिएर ग्राहकहरुमा कहिल्यै सन्तुष्टि पलाएको देखिँदैन । यो असन्तुष्टि अझ निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुमाथि नकरात्मक टिप्पणी तथा गाली गलौज गरिएका अनेकौं पोस्टहरु देखा परिरहेका हुन्छन् ।
तर सेवा प्रदायकहरु भने इन्टरनेटको स्पीड स्लो हुनुमा आफूहरुको मात्रै कमजोरी नभएको बताउँछन् । प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) नेपालले गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा उनीहरुले विदेशबाट ल्याउने व्यान्डविथ, विभिन्न सर्भर र मोबाइल एप लगायतमा आउने समस्याका कारणले गर्दा समेत इन्टरनेट स्लो हुन सक्ने बताए ।
अन्तरक्रियामा सुबिसु केवल नेट प्रालीका सीईओ विनयमोहन साउदले भारतका टाटा, एअरटेल लगायतका कम्पनीमा समस्या आउँदा, कुनै सेवा क्षमता भन्दा धेरै प्रयोग हुँदा र उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने डिभाइसको गुणस्तर आदि कारणले पनि इन्टरनेट स्लो हुन सक्ने बताए ।
‘हामीकहाँ इन्टरनेटको खपत धेरै बढेपनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पूर्वाधार र उपकरण छैनन्, व्यान्डविथ पनि विदेशबाट ल्याउनुपर्छ ।
हामीले भारतबाट किन्छौं । उता समस्या आएमा यता नेपालमा इन्टरनेट स्लो हुन्छ वा बन्द हुन्छ । त्यसमाथि नेपालको भौगोलिक विकटताले पनि समस्या पारेको हुन्छ,’ उनले भने ।
‘सर्भर ल्याइहाल्ने कुरामा हाम्रो नियन्त्रण हुँदैन । हामी पनि उनीहरुको दयामा चल्ने हो । यसमा कन्टेन्टको पोलिटिक्स धेरै छ, ’ बोहरा भन्छन्, ‘फेरी कन्टेन्टवालाहरुले पनि हामीलाई पैसा बाँड्दैनन् । तर हामीले उनीहरुको कन्टेन्टको गुणस्तर मिलाउनु पर्छ । कन्टेन्ट उताबाट आउँछ तर कन्टेन्ट बफर हुँदा हामीले गाली खान्छौं ।’
कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारण सर्वसाधारण घरभित्रै बस्नुपर्दा इन्टरनेटको स्पीडमा थप समस्या भएको छ । विशेषगरी टिकटक, फेसबुक र युटुवका प्रयोगकर्ताको संख्या र चलाउने समय पनि बढेकाले इन्टरनेट पुर्‍याउन हम्मेहम्मे परेको सुबिसु केवल नेट प्रालीका सीईओ विनयमोहन साउदको भनाई छ ।
लकडाउनपछि सुबिसु केवल नेटको मात्रै २२ देखि २५ जीबी व्यान्डविथको माग बढेको उनले जानकारी दिए । ‘लकडाउनअघि एउटा ग्राहकले महिनाभरमा झण्डै तीन सय जीबी इन्टरनेट खपत गर्दथे ।
अहिले पाँचसयदेखि ६ सय जीबी खपत भइरहेका छ । प्रायजसो प्रयोगकर्ताकै कारणले पनि इन्टरनेट केही स्लो भएको हुन सक्छ । यो कुरा उहाँहरुले पनि बुझिदिँदा राम्रो हुन्छ,’ सीईओ साउदले भने, ‘‘अर्को समस्या भनेको कस्टरमको साइमा पनि छ । वाईफाई कन्जेसन बढेर गइरहेको छ । इन्टरनेट जोड्ने संख्या बढेर गइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘वाईफाईका लागि राम्रो डिभाइस सेवाग्राहीहरुले पनि राख्नु पर्छ । यसले पनि कस्टमर एक्सपेरियन्सलाई सुधार्छ ।’
सेवाप्रदायकलाई मात्र दोष दिएर हुँदैनः आनन्दराज खनाल, दूरसञ्चार विज्ञ
टीजेएफले गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनालले देशमा भइरहेको अनेक अभावका बीच इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरुले दिएको सेवामा सन्तुष्ट हुनुपर्ने बताए ।
महामारीको बेलामा इन्टरनेटको गुणस्तर सुधारको लागि विकसित देशले व्यान्डविथ बढाउनेदेखि अन्य धेरै पहल गरेको, तर नेपाल सरकारले भने उपभोक्तालाई छूट दिने निर्देशन बाहेक अरु केही नगरेको खनालको आरोप छ ।
माग अनुसार इन्टरनेट सेवा बढाउन दुईवटा उपाय मात्र भएको उनी बताउँछन् ,पहिलो ब्याण्डविथ र दोस्रो पूर्वाधार ।
कोभिडको समयमा बढ्दो इन्टरनेट खपतलाई व्यवस्थापन गर्न युरोपले पूर्वाधारमा सीमितताको समस्या देखेपछि ओटीटीलाई क्वालिटी घटाउन लगाएर आफ्नो पूर्वाधारसँग मिलाउन लगाई सेवालाई व्यवस्थापन थप गरेको दृष्टान्त उनले सुनाए । यस्तै अमेरिकाले पनि प्रयोग नभएको फ्रिक्वेन्सी सेवाप्रदायकलाई थप गरिदिएको तर नेपालमा भने अकर्णमन्यता देखिएको उनले बताए ।
यसबाहेक घरमा धेरैवटा डीभाइस कनेक्टेड हुन्छन् । तर १० एमबीपीएस हामी एउटै डिभाइसमा खोज्ने सेवाग्राहीको अनुचित अपेक्षाको समेत उनले चर्चा गरेका थिए ।